Kadikoy | RayHaber | raillynews
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, Kadikoy Gen. Şahap Gürler Street ayaa biloowday shaqada wadooyinka sababtoo ah wadooyinka kale ee basaska IETT loo sameeyay. Joogsiyo cusub ayaa lagu soo kordhiyay Saldhigga Ayrılıkçeşmesi si looga hortago in reer Istanbul ay saameyn xun ku yeeshaan. [More ...]
Buundada Kadikoy Ibrahimaga waa Wada Shaqeyn! Wadada 5 lugeeyayaasha lugta; Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay bilaabaysaa duminta guryaha iyadoo laga duulayo dib u cusboonaysiinta Buundada Ibrahimaga ee Kadikoy. Dib-u-cusboonaysiinta buundada Ibraahimaga ayaa qaadanaysa bilo illaa 5. Degmada İstanbul Kadıköy [More ...]
Qorshaha Beddelka Qorshaha Cusub ee Degmadda 10 ee Istanbul
Qorshaha qorshaha cusub ee booyadaha ee degmada 10 ee Istanbul ayaa la hakiyey. 10, oo ay joojisay Dawladda Hoose ee Istanbul, ayaa la hakin doonaa maalinta ka danbaysa qorshaha cusub ee qorshaynta degaanka ee degmada laga joojiyay. [More ...]
Iskudhinta Qoduudaha Birta ee Kadikoy Uzunçayır Junction
Rakibayaasha alwaaxa birta ahi waxay ka bilaabmaysaa dhismaha wadada IMM ee Kad atköy Uzunçayır Junction. D-100 Highway 15 Luulyo Martyrs Bridge iyada oo loo eegayo shaqada ka socota isgoyska dib ugu laabashada isgoyska, berrito taraafikada ayaa laga siin doonaa Göztepe Junction. Istanbul [More ...]
367 oo ku taalla Saldhiga Haydarpasa. Toddobaadka toddobaad Maxay sababta ay ujirta ma dhamaato?
Haydarpaşa Solidarity, 367'inci markii saddexaad ayey soo wada urursadeen daawashada suuqa 'Haydarpaşa Gardır Gar wuu joogi doonaa' ayuu yidhi. Kooxda ayaa ku soo uruurtay hoggaanka Haydarpaşa Solidarity, Duqa magaalada Kadikoy Aykurt Nuhoğlu, CHP ku xigeenkiisii ​​hore Kadir Gökmen andt iyo TCDD [More ...]
Taariikhda laga soo qaaday wadooyinka Kadikoy
Duqa magaalada Kadikoy Aykurt Nuhoğlu wuxuu booqday goobta qadiimiga ah ee laga helay intii lagu guda jiray howlaha dayactirka agagaarka Xarunta tareenka ee Haydarpaşa. 2 waxay ku taqasusay taariikh ahaan saddex bilood xarunta tareenka ee Haydarpaşa, oo ay ku jiraan aaladaha. [More ...]
Kadikoy ee Gaariga Dheeraadka ah ee 1 Sanadka Cusub oo laga soo galo Goobta Tibbiye
Sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay Dawladda Hoose ee Magaalada Haydarpasa - khadka Gebze ee hareeraha ka dib shaqada dayactirka ee buundada Tıbbiye Street waa la baabi'in doonaa. Haydarpaşa oo ku taal Wadada Tıbbiye oo isku xirta Üsküdar iyo Kadıköy [More ...]
Hoos u dhigis ayaa bilaabay qadka qadka Kadikoy
Dhiiga nolosha Anatolia ee khadka magaalada ayaa la furay bilooyin. Dhismaha xariiqda magaalada hareeraheeda ah oo ay ku dhawaaqday Wasaaradda Gaadiidka, taas oo loo adeegsan doono bilihii ugu dambeeyay 2018, ayaa kordhay. Pendik - Kartal - oo leh Maltepe [More ...]
Kadikoy Dock waa la soo afjaray!
In kasta oo isbeddelka ay Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul qorsheyneysay sanado badan Kadikoy Quay oo ay ku jirtay nus qarni daal daal ayaa soo noqnoqday caqabado kala duwan, waqtiga cusboonaysiinta ayaa durbaba helaya. Dadka ku meel gaarka ah inta lagu jiro maalinta 3 [More ...]
Kadikoy Taşköprü Avenue ayaa mar labaad loo furay taraafikada
Marka la dhammaystiro Marmaray, khadka tareenka ee 2, oo hore u ahaa khadka 3, ayaa lagu soo saari doonaa jidka Haydarpaşa-Gebze. Buundooyinka iyo marinnada dhulka hoostiisa mara waa la cusboonaysiinayaa maxaa yeelay looma dhisin si waafaqsan xadka khadka tareenka ee 3. Inta uu gaarsiisan yahay Mashruuca Marmaray [More ...]
Kadikoy wuxuu noqonayaa Xarunta Metros
Xarunta Dhexe ee Kadikoy: Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Duqa Magaalada Kadir Topbas, Kadikoy Square ayaa shacabka kala hadashay isu soo baxa. Sida IMM, 13 sanadkii waxay ku maalgelisay 98 bilyan ginni Istanbul iyo sannadkan [More ...]
Tallaabooyinka ammaanka ayaa kordhay Istanbul
Tallaabooyinka amniga ayaa lagu soo kordhiyay Istanbul: Tallaabooyinka amniga ayaa lagu kordhiyay meelo kala duwan halkaasoo gaadiid dowladeed sida saldhigga basaska, Marmaray, doonta, metrobus iyo metro lagu sameeyay Istanbul si ay muwaadiniintu ugu qaataan Ciidul Adxaa nabad iyo amni. Uskudar [More ...]